अब ब्युटिपार्लर धाउन पर्दैन, घरैमा बसीबसी अनुहार चम्किलो पार्न यी तरिका अपनाउनुस ! | Citizen FM 97.5 Mhz
Home > स्वास्थ्य/जीवनशैली > अब ब्युटिपार्लर धाउन पर्दैन, घरैमा बसीबसी अनुहार चम्किलो पार्न यी तरिका अपनाउनुस !
अब ब्युटिपार्लर धाउन पर्दैन, घरैमा बसीबसी अनुहार चम्किलो पार्न यी तरिका अपनाउनुस !
एजेन्सी । आफ्नो अनुहार स्वस्थ र आकर्षक होस् भन्ने विषयमा महिलाहरू बढी सचेत हुन्छन् । अनुहारलाई आकर्षक र चम्किलो बनाइराख्न उनीहरू धेरै घरेलु तथा आधुनिक तरिका पनि अपनाउने गर्छन् ।
तर, आफ्नै घरवरपर पाइने विभिन्न जडीबुटी तथा फलफूललाई सौन्दर्य सामग्रीका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ । यस्तो जानकारी विभिन्न ब्युटिपार्लर या सौन्दर्य विशेषज्ञसँग लिएर घरैमा अनुहार चम्काउन सकिन्छ ।
प्राचीनकालदेखि अनुहारको चमक बढाउन चन्दनको लेप प्रयोग हुँदै आएको छ । यसले छालामा रहेका खुला छिद्रहरू कम गर्नुका साथै दाग–धब्बा हटाउन पनि सहयोग गर्छ ।
त्यस्तै, छालालाई कसिलो र नरमपना पनि प्रदान गर्छ । चन्दनको नियमित प्रयोगले अनुहारमा हुने चिल्लोपना कम गर्ने, फुस्रो कम गर्ने र अनुहारमा दानाहरू पनि आउन दिँदैन । अनुहारको चमक कायम राख्न गाजर, अंगुर र बन्दाको पेस्ट पनि लगाउन सकिन्छ ।
यो पेस्ट हप्ताको दुईदेखि तीनपटकसम्म लगाउँदा राम्रो हुन्छ । पेस्ट कपासले भिजाएर अनुहारको पूरै भागमा २० मिनेटजति लगाएर मसाज पनि गर्नुपर्छ । यस्तो मसाजले टोनिङको काम गर्छ । जसले छालालाई चम्किलो बनाइराख्न मद्दत पु¥याउँछ ।
स्वेच्छिक अवकाश रोज्ने कर्मचारीलाई घरपायक स्थानमा खटाइने : मन्त्री पण्डित
ऋण तिर्ने अनेकौं सपना बोकेर मलेशिया गएका खगेन्द्र अकस्मात बेखवर, श्रीमति भन्छिन्-‘भेटाउने मान्छेलाई देउता मान्नेछु’ (भिडियोसहित)
मार्च २०: आज विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस मनाइँदै